Waa maxay mushahar, fikradda mushaharka | Dhaqaalaha
Marxaladihii taariikhiga ahaa ee loo yiqiin Da'da Dhexe, guild masters waxay shaqaalaysiin jireen dadka ka shaqeeya aqoon isweydaarsigooda.Dadkaan la shaqaaleeyay mushahar ayey qaadan jireen maalintii; Tan waxaa loo yaqaan luqadda Faransiiska sida Jorurée, waxay ka timid ereygan Faransiiska ah ee ereyada hadda jira laga soo qaatay: shaqaale maalin iyo maalinba, oo si fudud loo oran karo waa dadkaas kuwa ku shaqeeya mushahar maalin ah.
2 Mushaharka iyo mushaharka ugu yar ee xirfadlayaasha
3 Noocyada lacag-bixinta ee shirkaduhu dooran karaan
3.1 Bixinta saamiyada shirkadda lafteeda
3.2 Bixinta tikidhada makhaayadaha
3.3 Iyada oo qorshayaasha hawlgabka ee shirkadda
3.5 Caymiska caafimaadka
3.6 Jeegaga xanaano-maalmeedka
3.7 Koorsooyin iyo tababarro
Ereyga mushahar Waxaa loo fahmi karaa inay tahay mushaharka shaqaaluhu helo iyadoo lagu beddelayo maalin waxqabad ama shaqo ah; haddii kale waxaa sidoo kale loo turjumi karaa shaqada uu hawl wade maalin kasta qabto.
Sidaa darteed, waxaan dhihi karnaa taas mushaharku waa mid ka mid ah qaababka jira ee mushaharka shaqada qof shaqaale ah, si kastaba ha noqotee, ereygan waxaa ku barakacay shuruudo kale oo aad u isticmaal badan sida: mushahar, mushahar, magdhow, gunno la bixiyo, ama khidmadaha, qaar ka mid ah kuwa kale.
El mushaharku wuxuu si aad ah uga sii darayaa dhibaatada ka taagan mushaharka, Maaddaama ay ka xayuubineyso shaqaalaha wax kasta oo kiciya oo ka dhigaya inuu ku dadaalo inuu horumariyo shaqadiisa, waxay sidoo kale u baahan tahay feejignaantiisa, taas oo ay tahay inay sii socoto, sidaa darteed waa mid aad qaali u ah oo xitaa u imaaneysa in la soo bandhigo natiijooyin aad u yar, isla markaana wuxuu sameeyaa Markay shaqaaluhu ku shaqeynta qaab caadi ah, taas oo ah in la yiraahdo dhowr ayaa isku mas'uuliyad ah, dadaalka waxaa xukumi doona kan shaqaalaha ah ee aan ku dadaalin shaqadooda, tani waxay muujineysaa caajisnimo, dabeecad xumo, tayo xumo, dhinacyada kale; Tani waa sababta oo ah bixinta shaqada la qabtay waxay la mid noqon doontaa qof walba, sidaa darteed ma jirto dhiirigelin in hawsha loo qabto si ka wanaagsan, laakiin iyadoo lagu saleynayo ugu yar ee loo baahan yahay ayaa ah in howlaha loo igmaday shaqaalaha la fulin doono. Sababtaas awgeed ayaa waxa loo yaqaan shaqo goyn (taas oo ah hab ka jira shaqaalaynta taas oo shaqaaluhu ku dalacayo fikradda shaqada la qabtay, halkii laga isticmaali lahaa waqtiga lagu qaatay), Waa beddel waxtar badan u leh maalinta xaalado badan.
Hadda aan u gudubno qeexitaanka shaqaale maalinle ah, erey kale oo loo adeegsan karo isku macno ayaa ah lacag la'aanWaa qof la shaqaaleeyey oo ku shaqeeya beddelka mushahar ama wixii la mid ah, lacag bixinta wakhtiga shaqada maalin kasta; sidoo kale waxaa badanaa loo adeegsadaa si aad u ballaaran oo ah eray loo adeegsado shaqaalaha beeraha ee aan dhulka lahayn.
Haddaba, marka la kordhiyo waxa ereygu tilmaamayo shaqaale, Waxaa sidoo kale lagu dabaqi karaa shaqaalaha ka shaqeeya aagga beeraha ee aan lahayn dhul, yacni, ma shaqeeyaan wax iyaga u gaar ah. Waxa shaxdan shaqaaluhu u taagan yahay ay sidoo kale xiriir dhow la leedahay dhismayaasha waaweyn ee ku yaal koonfurta Spain, iyo gaar ahaan kuwa Andalusia. Qaar ka mid ah gobollada Andalusia, xoogsatada maalintii la shaqaaleeyay xilligii abuurka ama gañanía waxaa lagu magacaabaa gañanes.
Mushaharka iyo mushaharka ugu yar ee xirfadlayaasha
Gudaha Spain, mushaharka ugu yar ee xirfadleyda (SMI) Waa mushaharka ugu yar ee leh taageero sharci oo shaqaaluhu ururin karo, iyadoon loo eegin dadaalka xirfadeed ee qofka. SMI-daan waxaa lagu muujin karaa siyaabo kala duwan, dhammaantood waxay ku saleysan yihiin cutubyo lacageed; ha ahaato maalintii, bil kasta ama sanadkii shaqada. SMI-daan waxaa lagu daabacaa sanad walba BOE.
Si loo dhiso mushaarka ugu yar ee u dhigma sanad kasta, Heerka Qiimaha Macaamilka (CPI) waa in si wada jir ah loo tixgeliyaa, iyo sidoo kale waxa u dhigma waxsoosaarka celceliska qaranka, iyo sidoo kale kororka kaqeybgalka shaqada ee la xiriirta dakhliga qaranka waana in sidoo kale lagu xisaabtamo dhaqaalaha xaaladda lagu lafa guray hab guud. Mushaharkan ugu yar waxaa loo badali karaa nus-sanadle kiisaska ay kujiraan kala duwanaanta miisaaniyada loo qoondeeyay sicirka sicirka macaamiisha (CPI).
Kuwa soo socdaa waa tusaalooyinka habdhaqanka mushaharka sanadihii la soo dhaafay. Sannadka 2013 waxaa loo dejiyey Xeerka Boqortooyada ee 1717/2012, oo leh taariikhda Diseembar 28 ee 21,51 euro maalin kasta iyo 645,30 euro bil kasta, marka lagu daro in lagu daro 2 lacag bixinno aan caadi ahayn. Haddii lacag-bixintani loo qaybiyo 12 lacag-bixin, mid kasta oo u dhiganta hal bil oo sannadka ah, iyada oo aan lagu kordhin, mushaharka ugu yar ee bil kasta soo baxa wuxuu u dhigmaa qiime dhan 752,85 euro. Lacagtaan la xisaabiyay waxaa loola jeedaa mushaarka guud, oo u dhigma waxa loogu yeero shaqo waqti-buuxa ah (taas oo, Isbaanishka, inta badan howlaha shaqadu ay ka dhigan tahay 40 saacadood oo shaqo ah usbuucii, haddii tan loo qaybiyo si looga tago a jadwal kaas oo dhammaan maalmaha shaqada ee toddobaadku ay leeyihiin isla saacado loo qoondeeyey, oo u dhiganta 8 saacadood maalintii). Xaaladaha badankood, haddii sabab kasta ha noqotee maalin shaqo oo ka yar la qabto, waxaa la helayaa lacag ama qaybta u dhiganta ee ku habboon waqtiga la shaqeeyay.
Sida laga soo xigtay qaybta xirfadeed ee shaqaalahaSidoo kale heshiisyada ganacsi ee la fulinayo, tirada la sheegay waa la kordhin karaa ama sidoo kale waa la yareyn karaa marka uu shaqaaluhu ku jiro xaaladaha tababarka qaarkood. Xiriirka shaqada iyo sidoo kale faahfaahinta waxaa lagu muujiyey Sharciga Shaqaalaha
Bishii Diseembar 2011 wax aan caadi ahayn ayaa dhacay, dowladda Mariano Rajoy ayaa xannibtay Mushaharka Ugu Yar, tani waa muhiim in la muujiyo maxaa yeelay markii ugu horreysay tan iyo markii la hirgaliyay mushaarka ugu yar tan ayaa dhacday. Markii la gaaro 2012, dowladda Xisbiga Caan ka ah ayaa sameysay wax la mid ah, mar labaad beenta mushaharka ugu yar ee la qaboojiyey Sannadkii 2014 xaaladdan oo kale ayaa dib u soo baxday, taasoo ka dhigeysa in mushaharka ugu yar la xayiray 645,30 euro bishiiba. Sidii hore loo soo sheegay, waajib ahaan, qandaraasku waa inuu lahaadaa 2 lacag bixin oo dheeri ah, waa qaabkan marka, marka lagu daro qaybinta lacagaha u dhigma hal qayb bishiiba, mushaarka ugu yar ee Isbaanishka, taas oo ah, canshuuraha kadib, waa noqo € 752,85 bishiiba.
Hadda aan wax ka qabanno waxa ay ku xiran yihiin mushaarka xisaabaadka. Kala saarida mushaaraadka qaaska ah, waxaa jira afar nooc oo mushahar ah: midka hore waa mushaar iib ah, kan labaadna wuxuu u dhigmaa mushahar rasiid ah, nooca saddexaad ee mushaharka ah waxaa loola jeedaa mushaarka wax iibsiga, kan ugu dambeeyana waa mushaharka khaaska ah waa lacag bixin lacageed maalinle ah. Shirkadaha adeegsada mid ama kabadan mushaharkaan waxay daabacaan macaamillada. Xaaladahaas meesha mushaharku kama tirsana mid ka mid ah afarta nooc ee mushahar gaar ah, lMacaamilka waxaa lagu daabici doonaa joornaalka guud, maxaa yeelay joornaalkan guud waxaa loola qabsan karaa ficil ahaan nooc kasta oo macaamil ganacsi ah. Qeybintu way jirtaa maxaa yeelay dariiq gaar ah ayaa loo sameeyay si loo waafajiyo noocyada gaarka ah ee macaamilada ay ka kooban tahay.
Mid kasta oo ka mid ah munaasabadaha ay shirkaddu bixiso lacag caddaan ah, si ay ula socoto, diiwaanka macaamilkan waxaa lagu daabacay joornaalka u dhigma lacag bixinta lacagta. Tan dhexdeeda mushaharka waxaa lagu darayaa dhammaan lacagaha la bixiyo iyadoo loo marayo adeegsiga jeegagga, bixinta lacagta iyo noocyada kala duwan ee elektaroonigga ah ee lacagta ay isla markiiba shaqaalaha ugu gudbiso. Xisaabinta, markasta oo aad lacag ku bixiso waxaa laguugu shubayaa koontada lacagta. Sababta ay tani u dhaceyso ayaa ah in "lacagta" ay tahay koontada hantida, oo dhammaan xisaabaadka hantida ay leeyihiin isku dheelitirnaan debit oo caadi ah. Miisaankani wuxuu matalayaa lacagta ay shirkaddu isla markiiba haysato, tani waxay muujineysaa in waxyaabaha qaarkood sida dheelitirnaanta ama xisaabaadka la bixin karo aysan ku jirin lambarradan.
Si ay u xakamaynta mushaharka waxaa loo sameeyaa si ka wanaagsan, dhammaan macaamillada la sameeyay inta lagu jiro muddada bil ayaa la duubay, ka dibna tiirarka mushaharka ayaa lagu darayaa. Ka dib markaad samaysay waxa kor ku xusan, wadarta guud ee deynta shirkadda iyo dhibcaha waa inay u dhigmaan midba midka kale. Haddii tani aysan dhicin, waxay caddayn u tahay in qalad ama qalad dhacay intii hawshu socotay. Goor dambe, marka wadarta guud la dhammaystiro kuwa kalena la hubiyo, wadar kasta oo u dhigma tiirarka waxaa lagu qorayaa buugga guud, taas oo ah rikoor ay ku kaydsan yihiin dhammaan xisaabaadka iyo dheelitirka ay shirkaddu leedahay. Dhammaan talaabooyinkan waxaa loo qaaday si shirkaddu ay si fiican ugu habaysan karto xisaabaadka waxa ay hayso, iyadoo la tixraacayo bixinta mushaharka.
Noocyada lacag-bixinta ee shirkaduhu dooran karaan
Shirkaduhu waxay dooran karaan inay shaqaalahooda dib ugu soo celiyaan siyaabo kala duwan. Intaa waxaa sii dheer, qaar iyaga ka mid ah waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda canshuurta shaqaalaha iyo shirkadda labadaba. Waa in maskaxda lagu hayaa in waddan kasta uu ku bixin karo siyaabo kala duwan, in kasta oo laga hadlay mushaharka ugu yar Spain, haddana waxaa jira waddamo uusan mushaharka ugu yar ka jirin. Maaddaama waddan kasta loo maamulo si madax-bannaan, noocyo ganacsi oo kala duwan ayaa soo baxa, iyo sidoo kale xuquuq kala duwan oo ay leeyihiin shaqaalaheeda. Marka laga soo tago howlaha uu shaqaaluhu u soo bandhigi karo shirkadda ay u shaqeeyaan, shirkad kasta waxay kuxirantahay waaxda, habka ay howlaheeda u fuliso, iyo waddanka ay ka tirsan tahay, waxay ku bixin karaan mushaharkooda si kala duwan.
Si tan loo sameeyo, waxaan eegeynaa qaar ka mid ah siyaabaha kala duwan ee mushaharkaan loo bixin karo.
Bixinta saamiyada shirkadda lafteeda
Waa dhaqan caadi ka ah wadamada Anglo-Saxon, laakiin Spain wali waa wax aad u tiro yar. Qaabkan mushaharku wuxuu daba socdaa ujeeddooyin kala duwan. Dhanka kale, haddii saamiyada lagu bixiyo bilaash ama qiimo ka hooseeya kan suuqa, shaqaaluhu wuu joojin karaa bixinta canshuuraha illaa inta wadarta guud aysan ku dhamaanaynin exceed 12.000 sanadkii.
Faa'iidada kale ee habkan mushahar siinta shaqaalaha ayaa ah in la waafajiyo danahooda iyo kuwa shirkadda. Caqligani wuxuu ku jiraa xaqiiqda ah in sida ugu wanaagsan ee shirkadu u shaqeyso, inbadan oo saamiyada ah ay qiimo yeelan doonaan, maxaa yeelay milkiilayaashu waa saamileyda ugu weyn ee shirkada sifiican wax u qabta.
Bixinta tikidhada makhaayadaha
Qaabkan lacag bixinta ayaa durba aad ugu baahay Spain oo dhan. Waa nooc kaar lacag bixin ah ama rasiidh loo adeegsan karo dukaamada martigelinta iyo maqaayadaha iyaga soo dhoweeya (badiyaa horayba way jireen).
Shaqaalaha, ugu horreeya € 11 maalintii la helo, maalmaha shaqada, Waa laga dhaafay canshuurta dakhliga shaqsiyadeed ee laga jaro. Dhinaca shirkadda, waxay ku leedahay faa iidada ka dhaafida bixinta canshuuraha shirkadaha.
Iyada oo qorshayaasha hawlgabka ee shirkadda
Waa tabarucaad ay shirkaduhu ku darsadaan alaabada amniga bulshada, midkoodna waa qorshooyinka hawlgabka. Waxay ku raaxaystaan ​​faa'iido cashuur labalaab ah. Shirkadaha, tabarucaadyadan waa laga jari karaa canshuurta shirkadaha. Shaqaale ahaan waxay noqon kartaa cashuur dhimis Dhamaan tabarucaada qorshooyinka hawlgabka ilaa ugu badnaan € 8.000 oo xaddidan 30% dakhligaaga.
Waa hab ay shirkaddu ku bixin karto lacagta barakacayaasha shaqaalaheeda oo ay uga faa’iideystaan ​​iyaga oo aan lacag bixin. Shaqaaluhu ma bixin doono canshuurta iyaga ugu badnaan € 1.500 sanadkii iyo € 136'36 bishii.
Waxaan sidoo kale ku dari karnaa halkan in shirkaddu ay bixiso gawaarida shirkadda, haddii ay dhacdo waa laga dhaafi doonaa inay bixiso 20% qiimaha gaariga cusub.
Waa dhaqan caadi ka dhex ah shirkadaha waaweyn. Labada shaqaale iyo kuwa iskood u shaqeysta € 500 ee ugu horeysa sanadkii waa la goyn karaa haddii aad gasho caymiska caafimaadka. Faa'iido ahaan, caymiska mas'uuliyadda madaniga ah ee shaqaalaha ama caymiska shilalka shaqada sidoo kale lama canshuuro.
Mid ka mid ah xulashooyinka loogu jecel yahay kuwa carruurta leh. Jeegaga xanaano-maalmeedka waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo kharashka carruurta u dhexeysa 0 ilaa 3 sano jir oo taga xarumaha xanaanada carruurta iyo xarumaha carruurta. Sida tikidhada makhaayadaha, kuwani waa laga dhaafay bixinta cashuurta dakhliga iyo faa'iido ahaan ma jiro xad bille ah ama sanadle ah jeegaggan.
Koorsooyin iyo tababarro
La faa'iido labalaab ah In bixinta koorsooyinka iyo tababbarka ay leeyihiin shaqaalaha iyo shirkaddu ay dan ugu jirto mid walba. Dhinaca kale, shaqaaluhu wuxuu xor u noqonayaa inuu helo tababarkan sidoo kale iska leh goobta uu ka shaqeynayo. Dhinaca kale, in shirkaddu awood u yeelato inay hesho shaqaale tababbaran oo ka wanaagsan aagaggooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Wargeyska
Sideen ugu beddelaa cinwaankayga Lambarka Bulshada?